Abaabulkii ugu danbeyay ee Axmed Madoobe xilka loga tuurayo oo Muqdisho ka socda… – Kismaayo24 News Agency
Abaabulkii ugu danbeyay ee Axmed Madoobe xilka loga tuurayo oo Muqdisho ka socda…
by admin 15th August 2018 15th August 2018 048
Xurgufta u dhaxeysa Dawlada Dhexe Ee Soomaaliya iyo maamulka Axmed Madoobe ee gabalkiisu sii dhacayo waxay gaartay heerki ugu saraysay waxaana Axmed Madoobe uu wajahaya xaalad walwal iyo walbahaar ah
Dawlada Soomaaliya ayaa labo jeer waxay la kulantay Amar diido uga timid taliska Axmed Madoobe taas oo arinka uga sii dartay dowlada somalia na ku qasabtay in ay diyaariso qorshe dag dag ah oo Axmed Madoobe loga taqaluusayo.
Taliyihii Guutada 43aad Ee Loo magacaabay Jubbaland waa tii lagu xanibay Kismaayo Garoonkeeda Bilo ka hor,iyadoo Xalay ugu dambeysay Taliyihii NISA Dawlada Dhexe u magacowday Jubbaland lagu xiray Kismaayo garoonkeeda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay Siyaasiyiin Mucaarad ku ah Axmed Madoobe oo Muqdisho ku sugan kuwaasi uu kala hadlay arimaha Jubbaland waxaana Madaxweynaha uu sheegay in Dowladiisa ay sinaba ula shaqayn kariin shaqsi ku xiran nabadiidka islamarkana wada xaalufin ba,an oo dhanka deeganka ah.
Sida qorshaha yahay Dowlada dhexe ee Somalia oo awood u leh in ay mudo kooban Maamulka Axmed Madoobe isbadal ku samayso ayaa wada qorsheyaal isdaba joog ah oo Axmed Madoobe lagu dhaafinayo shacabka Jubbaland ee u dhibaatada ku hayo.
Qancinta Shaqsiga iyo Xeer Jajabka oo ka xoog badan awoodaha Dastuurka (Faallo)
Taliyihii nabadsugida Jubbaland oo gudaha u galay Kismaayo iyo Axmed madoobe oo ku fashilmay in u tarxiilo..
Baarlamaanka Oo Lugta Marin Doona Madasha Hoggaanka Qaran!
admin 31st December 2016
DHAGEYSO: Halkan ka dhageyso warkii habeenimo ee Radio VOS.
XOG:- Diyaarado Qalab Ciidan u wada Dowlada Somali oo…